"1 Ary niondrana an-tsambokely Izy, dia nita ka tonga tao an-tanànany. 2 Ary, indro, nisy lehilahy anankiray mararin’ny paralysisa nandry tamin’ny fandriana nentin’ny olona teo aminy; ary Jesosy, nony nahita ny finoan’ireo, dia nanao tamin’ilay mararin’ny paralysisa hoe: Matokia, anaka; voavela ny helokao. 3 Ary, indreo, ny mpanora-dalàna sasany nanao anakampo hoe: Miteny ratsy ity Lehilahy ity. 4 Fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny, dia nanao hoe: Nahoana hianareo no mieritreri-dratsy ao am-ponareo? 5 Fa iza moa no moramora kokoa, ny manao hoe va: Voavela ny helokao, sa ny manao hoe: Mitsangàna, ka mandehana? 6 Fa mba ho fantatrareo fa ny Zanak’olona manana fahefana eto ambonin’ny tany hamela heloka (dia hoy Izy tamin’ilay mararin’ny paralysisa): Mitsangàna, betao ny fandrianao, ka modia any an-tranonao. 7 Dia nitsangana izy ka lasa nody tany an-tranony. 8 Ary ny vahoaka, raha nahita izany, dia raiki-tahotra ka nankalaza an’Andriamanitra, Izay nanome ny olona fahefana toy izany. 9 Ary nony niala teo Jesosy, dia nahita lehilahy atao hoe Matio nipetraka teo am-pamorian-ketra, ka hoy Izy taminy; Andeha hanaraka Ahy. Dia nitsangana Matio ka nanaraka Azy. 10 Ary raha nipetraka nihinana tao an-trano Izy, indreo, nisy mpanota sy mpamory hetra maro tonga ka niara-nipetraka tamin’i Jesosy mbamin’ ny mpianany. 11 Ary ny Fariseo, raha nahita izany, dia niteny tamin’ny mpianatra hoe: Nahoana kosa ny Mpampianatra anareo no miara-komana amin’ny mpamory hetra sy ny mpanota? 12 Ary raha nahare izany Jesosy, dia nanao hoe: Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody, fa ny marary. 13 Fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe: famindrampo no sitrako, fa tsy fanatitra alatsa-drà; fa tsy tonga hiantso ny marina Aho, fa ny mpanota." Matio 9:1-13
Jesosy Kristy miasa fatratra: Ny toritenin’i Jesosy (Toko 5-7) dia arahin’asa (Toko 8-9). Eto Jesosy sady manasitrana no mamela heloka. Ny Fanjakan’Andriamanitra dia mijery koa ny zava-misy ilain’ny olombelona eo amin’ny fiainany andavanandro ary misahana ny olona manontolo (saina, vatana, fanahy). Matetika dia adinoin’ny mpitory Filazantsara izany lafiny izany, andao atao ho modelitsika Jesosy.
Jesosy Kristy manome mihoatra lavitra: Tamin’ny finoana no nitondran’ireto olona ireto ny mararin’ny paralysisa teo amin’i Jesosy; raha niandry sy nanantena fanasitranana ho an’ny paralysisa izy ireo dia nahazo mihoatra lavitra dia ny famelana ny heloka izany. Toy izany koa i Abrahama raha nionona tamin’i Ismaela zanany tamin’i Agara (izay neritreretiny handova azy), nomen’Andriamanitra an’i Isaka izay tsara lavitra izy. Moa tsy izany va no fiasan’Andriamanitra amintsika koa ankehitriny? (Hebreo 11:40).
Jesosy Kristy maneho ny voninahitr’Andria-manitra : sitrana ary voavela heloka ilay paralysisa. Ny aretina dia tsy voatery ho vokatrin’ny otatsika foana (Jaona 9:1-3). Na izany na tsy izany, mila mandray ny famelankeloka isan’andro isika satria mety ho faty noho ny aretina ara-nofo isika fa mandova ny fiainana mandrakizay kosa satria voavela heloka. Ahoana kosa ireo olona salama tsara ara-batana sy finaritra nefa tsy manana an’i Jesoa Kristy amin’ny andro hahafatesany?
Toe-tsain’ny mpanora-dalàna sy fariseo: (3-8; 11), na ny eritreritra ao am-po, na ny hambara mivantana dia fantatr’i Jesosy avokoa. Meteza hanaiky ahitsiny ao amin’ny fihevitrao sy ny fihetsikao ary maneke hiova (Rômanina 12:2).